Prof. Jawaari oo sheegay in khilaaf dambe aanay jiri dooninViews: 333
.Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa balan qaaday in aysan dhici doonin in mar danbe uu qilaaf ka dhex dhasho madaxda sare ee dowlada. Dowladihi dalka ka hana qaaday 12 sano ee lasoo dhaafay ayey shacabka
Soomaaliyeed uga barteen in ay isku dhacaan madaxda sare sida Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaarihiisa, ama Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka. Qilaafyadi ugu muhiimsanaa ee ay dadka la yaabaanee waxaa ka mid ahaa
kii C/qasmid iyo Cali Khalif Galeyr, kii Cabdullaahi Yusuf iyo Cali Maxamed Geedi iyo Nuur Cade. Waxaa ugu danbeeyey Dowladi Sheekh Shariif oo ay jireen qilaafyo aad u
badnaa oo dhex maray sadexdi Ra’isulwasaare ee uu madaxweynihi hore soo
kala magacaabay ee kala ahaa Cumar C/rashiid, Farmaajo iyo C/wali Gaas. Waxaase ugu weynaa qilaafki la magac baxay Labada Shariif ee u dhaxeeyey Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan, qilaafkaasi wuxuu gaaray in marki danbe heshiis lagu soo kala saxiixay magaalada Kampala iyadoona loo bixiyey Kampala Acord. Hadaba isaga oo xasuusinaya shacabka Soomaaliyeed ayuu gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka u balan qaaday umada in aysan mar danbe maqli dooniin madaxda sare ayaa is qilaafsan. Isaga oo uu garab istaagnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu sheegay in ay ku heshiiyeen in ay mar walba wanaag ka wada shaqeeyaan oo
aysan dhicin qilaaf siyaasadeed oo dadka iyo dalka dhaawici kara. Jawaari wuxuu sheegay in aysanba isku shaqa aheyn oo baarlamaanka u taaganyahay sharci dajin madaxweynahana uu yahay odaygi dalka. Labadani mas,uul ayaa mid kasta kusoo baxay doorashooyin xor ah oo ay
doorteen baarlamaanka Soomaaliya, waana laba nin oo aqoonyahano ah, shacabkana waxay ka muujinayaan yadadiilo.
Maamulkii Xisbul Islaam ee laga qabsaday Buurhakaba oo sheegay inay ku biireen...
Prof. Galeyr oo ah musharax gudoomiyaha baarlamaanka
C/risaaq Jurile oo sheegay inuu tanaasulay
Views: 16404 Liverpool beat Cardiff on penalties to win Carling Cup
Views: 13590 Somali football squad hits Sudan to qualify for CAF junior
Views: 5796 LATEST NEWS
REPORT OF THE IGAD CONFIDENCE BUILDING MISSION TO MOGADISHU AND KISMAYO...
Saturday, May 25 2013 GUDI AQOONYAHANO CUSUB OO LOO XIL SAAREY MAMAUL USAMEYNTA KONFURTA SOOMAALIYA
Saturday, May 25 2013 Ciidamada Dowladda Sierra Leone oo ku wajahan Degmooyinka Jilib iyo Bu’aale
Saturday, May 25 2013 howlgalo balaaran oo kacsocda saakay xaafado katirsan magalada muqdisho
Saturday, May 25 2013 Qarax ka dhacay magaalada baydhabo
Saturday, May 25 2013 © Copy Right Buurhakaba Media 2012 - 2013 All Rights Reserved